I-iPhone 12: amarhe, ukumiliselwa nayo yonke into esiyaziyo- Iindaba ze-iPhone | IPhone iindaba
El I-iPhone 12, i-iPhone 12 Pro kunye ne-iPhone 12 Pro Max izakufika kwintengiso ngaphandle kotshintsho olukhulu kwinqanaba loyilo ngaphandle kokufumana imiphetho ye-iPhone 5 kunye nekhamera yesine. Ukongeza, iya kubandakanya okokuqala inkxaso 5G ukuziqhelanisa nenkqubela phambili yamva yonxibelelwano lwe-Intanethi.
I-iPhone 12: umhla wokukhutshwa kunye nexabiso
Nangona iApple ingakhange ityhile ukumiliselwa kude kube ngaphambi komsitho wokubonisa, iminyaka intetho yayo esemthethweni ibingoSeptemba wonyaka ngamnye, Ngokukodwa kwiveki yesibini, ke kulindeleke ukuba kulo nyaka umhla ofanayo uphinde uphindwe.
Kuya kufuneka sazi ukuba i-coronavirus inokuchaphazela zombini imveliso kunye nokunikezelwa kwe-iPhone 12, nangona ifuthe layo kulindeleke ukuba lincinci. Ngokuphathelene nomhla wokukhutshwa kwayo, akukho lutshintsho lukhulu kulindeleke ngokwemithombo yeDigiTimes.
Ubungakanani bayo buqikelelwa ukuba bugcinwe kwi 6,1 intshi kodwa ngotshintsho olusuka kwi-LCD luye kwi-OLED, inqanaba layo lokuhlaziya liya kunyuka ukusuka kwi-60Hz ukuya kwi-90Hz ukubonakalisa okungaphezulu.
Ukujonga ixabiso leemodeli zangaphambili kunye nendlela enokuthi ithathe le modeli intsha, i-iPhone 12 inokugqitha kumaxabiso € 799 kwimodeli esisiseko, i- € 1.000 ye-iPhone 12 Pro y € 1.200 ye-iPhone 12 Pro Max. Izinto kulindeleke ukuba zibize kakhulu kunangaphambili, kungoko ixabiso labo elitsha liphezulu.
Enye imodeli yexabiso eliphantsi yayilindelwe ngaphambili: i-iPhone 9 okanye i-SE 2. Kulindeleke ukuba iboniswe ngo-Matshi okanye ngo-Epreli 2020.
Uyilo lwe-IPhone 12
Iikhonsepthi zamva nje ezisekwe kukuvuza kunye namarhe okubheja Iikhamera ezine endaweni yeemodeli ezintathu zangaphambili, kunye imiphetho egudileyo esikhumbuza nge-iPhone 5.
Ngokubhekisele kwinotshi, eminye imithombo ibheja kwi ukuncitshiswa kwenotshi endaweni yokuncama i-ID yobuso. Nangona kunjalo, abanye abahlalutyi bathi yenye yeetekhnoloji eziphuculwe kakhulu yinkampani kwaye iyakuba yinto engenzi nto ukushiya i-ID yesazisi kuphela.
Le khamera yesine icingelwa ukuba iya kuba nokuchaneka okukhulu ekunikezelweni kwe3D yezinto, eziluncedo kwizinto ezinje ngeNene ebonakalayo.
Ukuba ufuna ukwazi ifayile ye- Umzuzu wokugqibela i-iPhone 12 kunye nawo onke amarhe kunye nokuvuza, ungaqhubeka nokufunda iindaba zabo apha ngezantsi.
Ngoku unokuthenga i-iPhone 12 okanye i-12 Pro ehlaziyiweyo kwi-Apple
Njengoko nonke nisazi, eli lelinye lamacandelo ewebhu e-Apple endihlala ndiwandwendwela amaxesha ngamaxesha…
Inkqubo yokulungisa i-iPhone 12 kunye ne-12 Pro eneengxaki zesandi
Inkampani yaseCupertino isandula ukumilisela inkqubo yokulungisa okanye yokutshintsha ezinye zeemodeli ze-iPhone 12 kunye ...
Ukuthengiswa kwe-iPhone 12 khange kuhlupheke ukwehla kwesiqhelo ngaphambi kokumiliselwa kwe-iPhone 13
Ikota yesithathu yonyaka ye-Apple ayihlali ilungile ngokweentengiso ze-iPhone, kuba ...
Iidili ku-Apple Watch Series 6 GPS + Cellular kunye nezinye iimveliso zeApple
Enkosi kwisivumelwano phakathi kweApple kunye neAmazon zokuthengisa iimveliso zabo ngokuthe ngqo kwiqonga le-e-commerce ...
Ngoku ungamisa ngeVenkile yeApple kwaye uthathe iMagSafe Battery Pack
por UToni Cortés yenzayo Iinyanga ze12 .
Ewe, sele zikhona iibhetri zeMagSafe ze-iPhone 12 kwisitokhwe kwiivenkile zeApple. Ke une…
IPhone 12 yehla ngaphantsi kwe-iPhone 11
Sonke siyazi ukuba iimveliso zeApple zibambe ixabiso lazo lemarike kakuhle xa zisetyenziselwa…
Ibhetri eNtsha yeMagSafe iqinisekisa ukuba i-iPhone 12 ixhasa ukuBuyisa ukutshaja okungenazingcingo
por UKarim Hmeidan yenzayo Iinyanga ze12 .
Esinye sezihloko esizigubungele kakhulu kwiipodcast zethu zeveki nganye ngamarhe okuba iApple ingazisa ...
I-Apple isungula ibhetri entsha yeMagSafe!
por UJordi Gimenez yenzayo Iinyanga ze12 .
Inkampani yaseCupertino isandula ukusungula ibhetri yeMagSafe ye-iPhone 12 enika ithuba lokutshaja ...
Intengiso entsha iphakamisa i-iPhone 12 Pro yendlela yobusuku yokufota
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iinyanga ze12 .
Inkqubela phambili kwizixhobo ze-iPhone zivumela abasebenzisi ukuba bafumane amava nangakumbi kunye nokuphuculwa kokusebenziseka ...
Uluhlu lwe-iPhone 12 ludlula iiyunithi ezizigidi ezili-100 ezithengisiweyo
Abafana boPhando lweConterpoint bapapashe ingxelo echaza ukuba i-iPhone 12 sele ithengisile ...
I-Apple ipapasha uluhlu lweemveliso ezingafanelekanga ukuya kwi-pacemaker
Ngokumiliselwa kwe-iPhone 12, abaliqela ngoogqirha abangakhange babone ngamehlo alungileyo ukumiliselwa ...